Google Photos ရဲ့ Free Backup မရပ်ဆိုင်းခင် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲ? – MyMedia Myanmar
Google Photos ရဲ့ Free Backup မရပ်ဆိုင်းခင် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲ?
Google Photos ဟာ အခုအချိန်အထိ ဓါတ်ပုံတွေကို High Quality အနေနဲ့ အခမဲ့ Backup ပြုလုပ်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက Android တင်မဟုတ်ဘဲ iOS အတွက်ပါ အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက် အကောင်းဆုံး ဓါတ်ပုံတွေကို Backup ပြုလုပ်ထားနိုင်တဲ့ Option တစ်ခုလို့တောင် ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း Google ကနေ လာမယ့် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့က စတင်ပြီးတော့ Google Photos အတွက် ဘယ် Quality နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အခမဲ့ Backup ပြုလုပ်ခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် အခမဲ့ Backup ပြုလုပ်ခွင့်မရပ်ဆိုင်းခင်မှာ ဘာတွေပြုလုပ်ထားသင့်သလဲဆိုတာကို ပြောသွားပေးသွားမှာပါ
(1) ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မတိုင်ခင် အရေးကြီးဓါတ်ပုံတွေကို Backup ပြုလုပ်ထားပါ
Google ဟာ Free Backup Option ကို ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ကနေ စတင်ပြီးဖယ်ရှားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တနည်းအားဖြင့် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မတိုင်ခင် Backup ပြုလုပ်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေက အခမဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်နေဦးမှာပါ။ အဲ့ဒီအတွက် တကယ်လို့ Google Photos မှာ Backup မပြုလုပ်ရသေးတဲ့ အရေးကြီးဓါတ်ပုံတွေရှိနေတယ်ဆိုရင် အခုပဲ စတင်ပြီး Backup ပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အခုနောက်ပိုင်း စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ Camera Megapixel တွေများပြားလာတာနဲ့အတူ ဓါတ်ပုံတွေရဲ့ File Size ကလည်း မြင့်မားလာတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ Google Account Storage ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားတာထက် အခမဲ့အရင်ဆုံးရယူထားတာပိုကောင်းပါတယ်။
(2) Backup ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် သေချာဂရုစိုက်ရွေးချယ်ပြီး Backup ပြုလုပ်ပါ
Google Photos ဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် Camera နဲ့ရိုက်ကူးတဲ့ဓါတ်ပုံတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် Backup ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခမဲ့ Backup မရရှိတော့တဲ့အချိန်မှာတော့ ဓါတ်ပုံကို Backup ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် ကျိန်းသေ လိုအပ်တဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုပဲ ရွေးချယ်ပြီး Backup ပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ဝေဝါးနေတဲ့ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဆင်တူတဲ့ပုံတွေကို ဖျက်ထားဖို့လိုအပ်ပြီး Google Photos ရဲ့ Settings မှာလည်း AI ကနေ အလိုအလျောက်သိရှိပြီး ဖျက်ပေးနိုင်မှာပါ။
(3) ကိုယ့် Google Account Storage ထဲက မလိုအပ်တဲ့ Files တွေကို ဖျက်ထားပါ
ပုံမှန်အားဖြင့် Google Account တစ်ခုကို Storage 15GB ပဲ ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကိုမှ Google Photos ကနေ အခမဲ့ Backup မပြုလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင် အချိန်တိုအတွင်းမှာ Google Account Storage က ပြည့်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုး မဖြစ်ဖို့အတွက် အခုထဲက Google Drive နဲ့ Gmail ထဲမှာ ရှိတဲ့ File Size ကြီးမားပြီး မလိုအပ်တဲ့ File တွေ၊ Mail တွေကိုဖျက်ထားသင့်ပါတယ်။
(4) အသုံးမလိုတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ဖုန်းရဲ့ Internal Storage မှာပဲ သိမ်းထားပါ
အခုအချိန်မှာ တစ်ခုကောင်းတာက Mid Range ဖုန်းတွေမှာလည်း အနည်းဆုံး Internal Storage ကို 128GB ဝန်းကျင်ပါဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက Google Photos မှာ အများဆုံး Backup ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ 15GB ထက် အဆများစွာပိုတဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုပဲ Google Photos မှာ Backup ပြုလုပ်သင့်ပြီး ကျန်တဲ့ မလိုအပ်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကိုတော့ ဖုန်းရဲ့ Internal Storage ထဲမှာပဲ သိမ်းထားသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ဖုန်းကို စိတ်မချဘူးဆိုရင်လည်း USB Memory Stick လိုမျိုးနဲ့ ပြောင်းလဲသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
(5) Google One Storage ကို ဝယ်ယူပါ
ဒီ Option ကတော့ Google Photos ကိုပဲ ပုံမှန်အတိုင်း Backup ပြုလုပ်ချင်တဲ့သူတွေနဲ့ Google Account ထဲမှာ 15GB Storage ပြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက် အသုံးဝင်မှာပါ။ Google One Storage ဟာ 100GB ၊ 200GB ၊ 2TB ကနေ 30TB အထိဝယ်ယူနိုင်သလို Family Member တွေနဲ့လည်း မျှဝေနိုင်တဲ့အတွက် ရေရှည်အတွက် အသုံးပြုဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။ စျေးအနေနဲ့ကလည်း တစ်လကို $1.99 ကနေ စတင်တဲ့အတွက် စျေးနှုန်းအရလည်း မဆိုးဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
Ref – Gadgets Now
The post Google Photos ရဲ့ Free Backup မရပ်ဆိုင်းခင် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲ? appeared first on MyTech Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-05-26T12:32:31+06:30May 26th, 2021|MYTECH MYANMAR|